ATOM RPG: nyowani yekuvandudza neIsometric mode | Linux Vakapindwa muropa
ATOM RPG: nyowani yekuvandudza neIsometric modhi
Ivo vanofarira vatambi vema Commandos, pamwe zvinovayeuchidza zvishoma nezve uyu wengano vhidhiyo mutambo mune zvimwe zvinhu. Chokwadi ndechekuti isu takatozivisa kare Commando 2 HD Remaster yeGNU / Linux mune yakapfuura chinyorwa. Nhau dzakanaka dzevateveri vemitambo yemavhidhiyo yerudzi urwu vanozogona kuinakidzwa papuratifomu yepenguin uye kwete paWindows chete kusvika nguva pfupi yadarika. Asi kana iwe uchida zvinopfuura iri zita rakagadziriswa, ATOM RPG inogona kunge iri izvo zvauri kutsvaga...
ATOM RPG mutambo wevhidhiyo wakafemerwa neakakurumbira kuwa neWasteland, iine mahara emahara. Kunyanya, iyo yekupedzisira yakasanganisira Isometri maitiroc, ine nzira nyowani yekutamba zita iri. Zvakare, sekuziva kwako, iri zita rinowanikwawo kuGNU / Linux, saka haufanire kushandisa Proton kubva kuSteam kana chero chinhu chakadai. Sezvaunogona kufungidzira, inowanikwa pakati peavo vari mukatalog ye chiutsi uye zvakare muchitoro chepamhepo che Gogi.
Mukuwedzera kune iyo isometric mode, kune zvakare kumwe kugadziridzwa mukuwedzera kwemahara uku. Semuenzaniso, kumbomira otomatiki kwave kuverengerwa kana iwe uchideredza iyo vhidhiyo yemutambo hwindo, iyo inobatsira chaizvo kana iwe uchida kuve usipo kwechinguva. Kune mamwe maosnidos matsva akagadziridzwa, mashandiro matsva, kuvandudzwa mumamepu, uye zvakawanda zvembugs zvakagadziriswa neichi chiitiko.
Vamwe ve zvitsva zvinotsanangurwa kuLinux, sekugadzirisa chimwe chetsikidzi papuratifomu pawakamhanya ATOM RPG uye zviratidzo zvisina kujairika zvakaonekwa mune hunhu bios. Kune rimwe divi, ivo vakapawo Gamepad rutsigiro, zvakagadziriswa zvishoma, nzvimbo nyowani dzemisangano, zvombo zviviri zvitsva zvine VSSM neSaiga-A, zvimwe zvekuwedzera maficha.
Ndo izvo zvinowedzerwa kune yatove inovimbisa base zita rekuremekedza iyo ine inveterate mafeni nekuda kwemusanganiswa uyo vagadziri veATOM RPG ye zano, kupona, basa uye chiito chakamiswa munguva yepashure-apocalypticZvese mune imwe nguva ya1986.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » ATOM RPG: nyowani yekuvandudza neIsometric modhi
CentOS 8.0 Zvino Yava Kuwanikwa, Inosanganisira Izvo Itsva muRed Hat Enterprise Linux 8.0